ओलिमा कोल्ड वार हैक 🥇 धोखा दिन्छ, एम्बोट, ESP, वालह्याक - गेमप्रॉन
ओलिमा ड्युटी कालो अप्सको कल: चिसो वार ह्याक
शीतयुद्ध आखिरमा ओलीमा प्रयोग गरेर सही ह्याकरको रूपमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ!
गेमप्रोनको अस्थायी सदस्य बन्नुहोस् र यो कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्! आज १-दिन उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्।
तपाईंले उपकरणहरूको प्रयास गर्नु भएको छ वा उनीहरूलाई मनपराउने, वा केवल यसमा डुबुल्की मार्न चाहनुहुन्छ, यो तपाईंको लागि हो! १ हप्ता उत्पादन कुञ्जी आज खरीद गर्नुहोस्।
गेमप्रॉन अनुग्रहको साथ परिवारमा सँधै समर्पित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दछ! आज १ महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्।
शीत युद्ध हामीले देखेका सबैभन्दा लोकप्रिय कल अफ ड्यूटी रिलिज मध्ये एक हो, र यसले केवल हाम्रो ओलिमा कोल्ड वार ह्याकलाई विकासको लागि बुद्धिमत्ता प्रदान गर्‍यो हाइपको साथ मेल खान। एक धोकामा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईंको दुनिया परिवर्तन गर्न गइरहेको छ!
सीओडी कालो अप्स: शीत युद्ध ओलिमा हैक जानकारी
शीत युद्दको प्रतिस्पर्धालाई हराउन मद्दत गर्ने ठोस छलको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? अगाडि नहेर्नुहोस्, जस्तो कि शीत युद्द ओलिमा ह्याकमा सम्पूर्ण टिमहरू आफैले आफैं लिनको लागि सबै सुविधाहरू छन्। आज FOV सर्कलमा सुसज्जित हाम्रो शीतयुद्ध Aimbot को प्रयोग गर्न कस्तो लाग्छ! इंटेल र एएमडी सीपीयूको लागि विकसित, यो धोका अंग्रेजीमा आउँछ र Nvidia र AMD- आधारित GPU को लागि आरक्षित छ। धोखा आन्तरिक र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, त्यसैले एक नौसिखिया ह्याकरले पनि गेमप्रोनमा यहाँका उपकरणहरूबाट फाइदा लिन सक्दछ।
FOV सर्कल, चिसो Aiming, हड्डी प्राथमिकता, र अन्य प्रतिस्पर्धी सुविधाहरू को साथ एक शीत युद्ध Aimbot जस्तै अद्भुत सुविधाहरू फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंको विरोधीहरूलाई एक केकवाक लिने बनाउँदछ। एक ESP ह्याक (अतिरिक्त सेन्सरि परसेप्शन) पनि समावेश छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको टिममेट, दुश्मनहरू र भित्ताहरू मार्फत आइटम पनि भेट्टाउँदछ।
दुश्मन जानकारी (दूरी, टीमका साथीहरू, नाम, स्वास्थ्य)
उद्देश्य FOV सर्कल
कुनै विशेष सुविधाहरू छैन तर चाँडै आउँदैछ
सीओडी कालो अप्सको बारेमा: चिसो युद्ध ओलिमा हैक
सीओडी ब्ल्याक अप्स: शीतयुद्ध ओलिमा स्ट्रिम प्रुफ होइन, तर अझै अरूको तुलनामा द्रुत प्रगति गर्न खोजिरहेकाहरूको लागि यो ठोस विकल्प हो। यो तपाइँको दर्शकहरु मनोरन्जन को लागी आदर्श नहुन सक्छ, तर यो ती पसिना खेलहरु को लागी उपयुक्त छ कि तपाइँको हातले पहिले भन्दा बडी क्लामीयर छोड्छ! तपाईं हाम्रो शीत युद्ध ओलिमा हैक शुरू गर्नुभन्दा पहिले संरक्षणहरू असक्षम गर्न चाहानुहुन्छ, एक गलत सकारात्मकले धोखालाई राम्रोसँग काम गर्नबाट रोक्न सक्छ। तपाईं पूर्ण-स्क्रीनमा यस धोखा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं योसँगै कन्ट्रोलरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (जबसम्म तपाईं एक उपकरणको साथ कन्ट्रोलरलाई पुन: सिर्जना गर्नुभयो)।
किन सीओडी कालो अप्स प्रयोग गर्दछ: शीत युद्ध ओलिमा अन्य प्रदायकहरु भन्दा बढी?
अन्य प्रदायकहरू केवल तपाईंको अनुहारमा हाँस्नेछन् जब तपाईं उपकरण अद्यावधिकहरू, वा ग्राहक समर्थनको बारेमा सोध्नुहुन्छ, जुन गेमप्रोनमा त्यस्तो छैन। त्यो मात्र होईन, तर हाम्रा सबै उपकरणहरू लामो समयसम्म निर्माण गर्नका लागि बनाइएको थियो, जसको अर्थ हामी उनीहरूलाई खेलको तालिकाभरि अद्यावधिक राख्दछौं। जब त्यहाँ सीओडी ब्ल्याक अप्सका लागि अपडेट हुन्छ: शीतयुद्ध, अनौठो कुरा के तपाईं हाम्रो शीतयुद्ध ओलिमा ह्याकको लागि अपडेट अपडेट हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ! हाम्रा उपकरणहरू अद्यावधिक राख्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई गेमप्रोन मार्फत उत्तम ह्याकि experience सम्भव अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसले हामीलाई विगत केही वर्षहरूमा आफ्नो लागि नाम निर्माण गर्न मद्दत गरेको छ।
हाम्रो सीओडी ब्ल्याक अप्समा भेटिएको इन-गेम मेनू: शीतयुद्ध ओलिमा हैक केवल पहुँच गर्न सजिलो छैन, तर यसले तपाईंलाई ह्याकलाई तपाईंको रुचि अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं हाम्रो सीओडी ब्ल्याक अप्ससँग सम्बन्धित लगभग सबै सेटि adjustहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ: शीतयुद्ध ओलिमा हैक, कसरी एम्बोटले प्रतिक्रिया दिन गइरहेको छ, तपाईंको FOV सर्कल कती ठूलो हुनेछ। कन्फिगर गर्नुहोस् जुन ESP को हेक सक्षम भएको साथ दृश्यात्मक हुन गइरहेको छ, साथै हाम्रो शीत युद्ध धोखाको सम्बन्धमा धेरै अन्य सेटि adjustहरू समायोजित गर्नुहोस्। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् जब हामी भन्छौं कि गेमप्रोनले प्रतियोगितालाई समाप्त गर्यो जब यो हाम्रो ह्याक्समा आउँदछ, विशेष गरी इन-खेल मेनूको।
Q5। के धोखाले Warzone मोडमा काम गर्दछ?
A6 हो, यो पूर्णस्क्रिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Q7। के म कन्ट्रोलरहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
A7। हो, तर पुनःप्राप्ति उपकरणको साथ लक्ष्यलाई रीम्याप चाहिन्छ।
तपाईलाई मद्दत गर्न र्यान्डमहरूमा निर्भर थकित हुनुहुन्छ कि, वा तपाई केवल "अर्को तर्फ" कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ, हाम्रो शीतयुद्ध ओलिमा चीटको प्रयोगले तपाईलाई एक भन्दा बढि तरीकाले जित्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
गर्न तयार प्रभुत्व जमाउनु हाम्रो सीओडी बो ओलिमा हैक संग?